Raha iny vao saika handray antso iny ity vehivavy ity no nisy nisintona tampoka ny finday teny an-tanany. Nitsaoka avy hatrany moa ilay mpanendaka vao azony ilay finday. Niantso vonjy ny teo amin'ny manodidina ity ramatoa ka niezaka ny nanenjika ihany ireo fokonolona fa tsy tratran'izy ireo intsony ilay jiolahy. Tamin'izany indrindra no nandalo nanao fisafoana teny amin'iny faritra Ambohimitsinjo iny ireo polisy ka nampilazan'ireo fivondronam-pokonolona ny zava-misy. Nandray ny andraikiny avy hatrany ireto farany. Rehefa nikaroka nandritra ny minitra maromaro ireo polisy ireo dia hita ihany ity jiolahy mpanendaka ity ka nosamborina ary nentina namonjy ny birao avy hatrany. Atolotra ny fitsarana androany 19 marsa 2020.Natolotra ny fitsarana, omaly ny lehilahy.